ကိုးကားဆောင်းပါးများ - Foregene Co., Ltd.
Foregene's kits များကို အသုံးပြု၍ ကိုးကားချက်ဆောင်းပါးများ ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
IF ထုတ်ကုန်အမည် ဆောင်းပါးအမည်
IF: 15.336 ဆဲလ်စုစုပေါင်း RNA သီးခြားခွဲထုတ်ကိရိယာ Wang D၊ Li S၊ Zhao Z၊ et al။Multiplexed Diagnosis နှင့် Synergistic Therapy အတွက် Live Cell Membranes များကို အာရုံခံစားနိုင်ရန် Second-Order DNA Logic-Gated Nanorobot ကို အင်ဂျင်နီယာလုပ်ပါ။Angew Chem Int Ed Engl2021 ဇူလိုင် 12;60(29):15816-15820။doi: 10.1002/anie.202103993။
IF:14.593 ဆဲလ်စုစုပေါင်း RNA သီးခြားခွဲထုတ်ကိရိယာ Liwei Fu၊ Pinxue Li၊ Junyao Zhu၊ et al.Tetrahedral framework nucleic acids သည် synovium မှရရှိသော mesenchymal ပင်မဆဲလ်များ၏ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်ယန္တရားအား မြှင့်တင်ပေးပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော အရိုးနုများ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြသသည်၊ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊2021၊ISSN 2452-19 doi:10.1016/j.bioactmat.2021.07.028။
IF: 12.479 ဆဲလ်စုစုပေါင်း RNA သီးခြားခွဲထုတ်ကိရိယာ Xu Y၊ Niu Y၊ Wu B၊ et al။စက်တွင်း ကျောက်ကပ်ကြားရှိ fibrosis ကို သက်သာစေရန် လက်ခံသူ-ဧည့်သည် supramolecular hydrogel မှတစ်ဆင့် ကုထုံး microRNA ၏ တိုးချဲ့-ထုတ်လွှတ်မှု။ဇီဝပစ္စည်းများ။2021 သြဂုတ်လ; 275:120902။doi: 10.1016/j.biomaterials။
IF: 11.556 ဆဲလ်စုစုပေါင်း RNA သီးခြားခွဲထုတ်ကိရိယာ Wang C၊ Li X၊ Ning W၊ Gong S၊ et al.ပလာစမာ၏ Multi-omic profileing သည် COVID-19 ရှိသည့် ကလေးများတွင် မော်လီကျူးပြောင်းလဲမှုများကို ဖော်ပြသည်။သီအိုရီ။2021 ဇူလိုင် 6;11(16):8008-8026။doi: 10.7150/thno.61832။)
IF: 18.808 တိရစ္ဆာန်စုစုပေါင်း RNA သီးခြားခွဲထုတ်ကိရိယာ Zheng, Q., Qin, F., Luo, R., et al.Central Composite Design ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အသည်းအခြေခံတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက် mRNA-Loaded Lipid-like NanoparticlesAdv ။Functionမေမေ။2021၊ 31၊ 2011068.doi:10.1002/adfm.202011068။
IF:18.187 တိရစ္ဆာန်စုစုပေါင်း RNA သီးခြားခွဲထုတ်ကိရိယာ He X, Hong W, Yang J, et al.ကုထုံးပင်မဆဲလ်ပြင်ဆင်မှုတွင် ဆဲလ်များ၏ အလိုအလျောက် apoptosis သည် phosphatidylserine ၏ထုတ်လွှတ်မှုမှတဆင့် immunomodulatory အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးသည်။Signal Transduct Target Ther2021 ဇူလိုင် 14; 6(1): 270။doi- 10.1038/s41392-021-00688-z။
IF:17.97 တိရစ္ဆာန်စုစုပေါင်း RNA သီးခြားခွဲထုတ်ကိရိယာ ဒိုင် Z၊ Liu H၊ Liao J၊ et al။N7-Methylguanosine tRNA ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းသည် oncogenic mRNA ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး သွေးကြောတွင်း cholangiocarcinoma ကြီးထွားမှုကို အားပေးသည်။Mol Cell2021 ဇူလိုင် 29:S1097-2765(21)00555-4။doi: 10.1016/j.molcel.2021.07.003။
IF: 9.225 တိရစ္ဆာန်စုစုပေါင်း RNA သီးခြားခွဲထုတ်ကိရိယာ Cao X, Shu Y, Chen Y, et al.Mettl14-Mediated m6A ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းသည် Endoplasmic Reticulum Homeostasis ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် အသည်းပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကို လွယ်ကူစေသည်။Cell Mol Gastroenterol Hepatol ။2021;12(2):633-651။doi: 10.1016/j.jcmgh.2021.04.001။
IF: 5.537 Plant Total RNA Isolation Kit Chi Z၊ Dai Y၊ Cao S၊ et al.Exogenous ကယ်လစီယမ် ကလိုရိုက် (CaCl2) သည် လတ်ဆတ်သော သစ်တော်သီးများတွင် γ-aminobutyric acid (GABA) စုဆောင်းမှုကို အားပေးသည်။ ရိတ်သိမ်းပြီးနောက် ဇီဝဗေဒနှင့် နည်းပညာ၊ အတွဲ 174,2021,111446,ISSN 0925-5214။ doi:10.1016/j.postharvbio။
IF: 5.753 Plant Total RNA Isolation Kit Shah Kamran, An Na, Kamanova Svetlana, et al.Salicylic Acid Treatment ဖြင့် အရွက်ကျန်းမာရေး အမှတ်အသားများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့် ပန်းပွင့်ချိန်ကို ကန့်သတ်ခြင်း- Malus ပြည်တွင်းတွင် ပန်းပွင့်လာစေရန် နည်းလမ်းသစ်တစ်ခု။Plant Sci.၊2021 ဇူလိုင် 19.doi:10.3389/fpls.2021.655974။
IF: 7.561 QuickEasyTM Cell Direct RT-qPCR Kit–SYBR Green I Li Q၊ Yuan M၊ Jiao X၊ et al.M1 Macrophage မှရရှိသော Nanovesicles များသည် Endometriosis ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဟန့်တားရန်အတွက် M2 Macrophages ကိုပြန်လည်ပိုလန်စေသည်။ရှေ့ဘက် Immunol ။2021 ဇူလိုင် 20; 12:707784။doi: 10.3389/fimmu.2021.707784။
IF: 18.808 Real Time PCR EasyTM-SYBR Green I Cai LL၊ Yang CY၊ Jia WF et al။BBB Transcytosis နှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၏ ပစ်မှတ်ထားကုထုံးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် Endo/Lysosome-Escapable Delivery Depot.doi:10.1002/adfm.201909999.q
IF: 11.413 Real Time PCR EasyTM-SYBR Green I Wenqi Yu၊ Ruyi Lin၊ Xueqin He နှင့် al.Self-propelled nanomotor သည် ပေါင်းစပ်ထားသော hypoxia လျော့ပါးရေးနှင့် glycolysis inhibition၊Acta Pharmaceutica Sinica B,2021,ISSN2211-381035.do. .2021.04.006.
IF: 9.803 Real Time PCR EasyTM-SYBR Green I Tong S၊ Chen N၊ Wang D၊ et al။U-box E3 ubiquitin ligase PalPUB79 သည် Populus ရှိ PalWRKY77 ကို နေရာအနှံ့ ပျံ့နှံ့စေခြင်းဖြင့် ABA-မှီခို မိုးခေါင်မှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကို အပြုသဘောဖြင့် ထိန်းညှိပေးသည်။အပင်ဇီဝနည်းပညာ ဂျေ 2021 သြဂုတ် 11။ doi: 10.1111/pbi.13681။
IF: 25,617 RT-PCR EasyTM II (အဆင့်နှစ်ဆင့်) Chen J, Li X, Li L, et al.Coagulation Factors VII၊ IX နှင့် X တို့သည် ဆေးယဉ်ပါးသော ဂရမ်-အနုတ်ဘက်တီးရီးယားများကို တိုက်ဖျက်ရန် ထိရောက်သော ဘက်တီးရီးယား ပရိုတင်းများဖြစ်သည်။ဆဲလ် Res2019 စက်တင်ဘာ;29(9):711-724။doi- 10.1038/s41422-019-0202-3။